यसरी गरौ दमको रोगको हर्बल पद्धतिवाट उपचार विधि, जानी राख्नुहोस्
अक्टोबर 15, 2019 अक्टोबर 15, 2019 साइन्स इन्फोटेक2Comments उपचार, दम, हर्बल पद्धति
दम भनेको श्वासप्रश्वाससित सम्बन्धित एउटा रोग हो । यसलाई अंग्रेजीमा आस्थमा (Asthama) भनिन्छ । वातावरणीय प्रदुषण, धुवाँ धुलो, चिसो तथा फूल फूल्ने मौसममा फूलको परागको कणबाट हुने विभिन्न एलर्जीका कारण जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई दम हुन सक्दछ । यदि कसैलाई एलर्जी छ र त्यो लामो समयसम्म रहृयो भने पनि मानिसलाई दम हुने गर्दछ ।
दमको रोगको उपचार गर्दा गर्दा थाकी सक्नु भएको छ तर सन्चो हुन सकेको छैन भने यो औषधि बनाएर सेवन गर्नुहोस् यो फर्मुला हामीले अनुभुत योगबाट लिएका छौं । यो औषधि अनेकौं पटक प्रयोग भइसकेको छ । यस्ता औषधि बनाएर सेवन गर्न सके असाध्य रोग पनि साध्य भएको अनेकौं पटक प्रयोग गरेका प्रयोग कर्ताको अनुभव छ ।
दम किन र के कारणले हुन्छ ?
१. विशेषगरी ३०/३५ वर्ष उमेर समूहका मानिसमा देखिने यस्ता आस्थमा वंशजका कारण हुने गर्दछ । आन्तरिक कारणले नै हुने भएको यस प्रकारको आस्थमालाई इन्टि्रन्सिभ दम पनि भन्ने गरिन्छ ।
२. कयौं मानिसहरुलाई वायु प्रदुषणका कारणले एलर्जी र पछि दम हुने गर्दछ । जसलाई एक्सटि्रन्सिभ आस्थमा पनि भन्ने गरिन्छ ।
३. मिल, मैदा उद्योग, कपडा उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, बाटो-घाटोमा काम गर्ने व्यक्तिहरुमा पनि दमको जस्तै समस्या देखिने गर्दछ । काम गर्ने क्रममा धुलो धुँवा उड्ने र श्वास फेर्नेबेला नाक मुखबाट फोक्सोसम्म धुलो गएर दम हुन्छ ।
४. मुटु रोगले हुने दममा मुटु रोगीलाई सोही कारणले दम खोकी भएमा पनि दमका जस्तै लक्षण हुने गर्दछ ।
५. लामो समय खोकी लागेर सहि उपचारको अभावमा पनि दमको रोग लाग्न सक्छ ।
१. वायु प्रदुषण तथा एलर्जीका कारण हुने दम उपचारबाट निको पार्न सकिन्छ । तर खोकी लाग्दालाग्दै स्वाँ-स्वाँ हुने, छाती कराउने अवस्थाको सिर्जना भएमा क्रोनिक आस्थमा हुने गर्दछ ।
हर्वलबाट उपचार गर्ने विधि
१. पीपल १० ग्राम, काकडासिंगी १० ग्राम दुवैलाई मसिनो गरि पिस्नुहोस् । यो एक खुराक औषधि तयार भयो । मूर्णमासीको दिन ब्रत बस्नुहोस् । त्यसदिन दूधको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ । साँझ गाईको दूधको खिर पकाउनुहोस् ।
जब दूध उम्लन थाल्दछ औषधिको पुडिलाई सात पटक “ॐ ओं ” पढेर पाकेको दूधमा हाल्नुहोस् र चादनी रातमा कासको थालीमा खिरलाई हालेर सेलाउन दिनुस र चादनी रातमै त्यो सवै खानुहोस् । यो नियम ३ पटकसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । सदाका लागि दमको दोहोलो हुनेछ ।
नोट : दमको रोग लागेको थाहा हुनासाथ डाक्टर या वैद्यको परामर्शमा उपचार गराउनु राम्रो हुनेछ ।
← पत्रिकाबाट पनि आधा टाउको दुख्ने रोग हुनसक्छ निको
ग्याष्ट्रिकको औषधि र्‍यानिटिडिनले क्यान्सर हुने, आजैदेखि छोड्नुस् खान →
2 thoughts on “दमको रोगको हर्बल पद्धतिवाट उपचार विधि”
Pingback: स्वास्थ्यमा चरम लापरबाही किन हुन्छ ? डाक्टर र अस्पतालले जान्नुपर्ने कुराहरु
Pingback: यसरी तयार गर्नुहोस् आयुर्वेदिक जडिबुटीबाट जुकाको औषधि, जानी राखौ